အကျိုးရှိတဲ့ သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအကြာလေးတွေကို သေချာမှတ်သားသွားပါတယ်ဆရာ… ခုလို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးပါဆရာ…
မှတ်သားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သစ္စာလေးပါးကလွဲရင် အမှန်တရား မရှိပဲ ကျန်တာ ပညတ်တွေပဲလို့ ဘုရားဟောထားတာလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့
((ကောင်းခြင်း, ဆိုးခြင်းသည်ကား ကာလဒေသပေါ်လိုက်၍ သတ်မှတ်ထားသော ပညတ်ချက်များသာဖြစ်သည်။ သူ့အမြင်တွင်မှန်သော်လည်း ကိုယ့်အမြင်တွင် မှားနေနိုင်သည်)) ဟု ယူဆသော ပညတ်ဂိုဏ်းသား အယူအဆကို လောကုတ္တရာတရားနဲ့ မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အတွက်ဆိုရင် ကျွန်မလက်ခံတယ်။
သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ။ သေချာဖတ်သွားတယ်။
မငယ်နိုင် ပြောသွားတဲ့ သစ္စာတရားလေးပါးကလွဲရင် ကျန်တာ အမှန်မရှိပဲ ပညတ်တွေလို့ ဘုရားဟောထားတာတွေ ရှိတယ်လို့ သိလိုက်ရလို့ တအား သိချင်သွားတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုဧရာ မသီတာတို့ ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရေးပေးပါလားလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
သီတာရေ...ဖတ်ရတာ အကျိုးရှိတယ်၊ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အနဲဆုံးတော့ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ဆိုတာလေးနဲ့ ဒိဌိ၃မျိုးလောက်သိထားရင်ကိုပဲ..အကျိုးကြီးလှပါပြီ၊ ဒီတရားတွေကမှ လောကဓံ ခံနိုင်ရည်ကို မွေးဖွားပေးနိုင်တယ်လေ...။
စာလာဖတ်ပြီး ဉာဏ်မီသလောက်တွေးပါသည်။ “အကိရိယ၀ါဒ
ကောင်းခြင်း, ဆိုးခြင်းသည်ကား ကာလဒေသပေါ်လိုက်၍ သတ်မှတ်ထားသော ပညတ်ချက်များသာဖြစ်သည်။ သူ့အမြင်တွင်မှန်သော်လည်း ကိုယ့်အမြင်တွင် မှားနေနိုင်သည်ဟု ယူဆသော ပညတ်ဂိုဏ်းသား (moral relativists) များသည်လည်း ကောင်းဆိုးဟူသော ကုသိုလ်အကုသိုလ်အား ပစ်ပယ်ရာရောက်သည်။ ထို့အတူပင် အချို့ပရမတ်သမားတို့ကလည်း အစစ်မှန်အားဖြင့် ပရမတ်တရားများသာ ရှိပြီး လူ, တိရိစ္ဆာန်ဟု မရှိဟူ၍ သမုတိသစ္စာကို ငြင်းပယ်ကာ “လူသတ်သည်ဟုမရှိ၊ အရက်သောက်သည်”မရှိဟု ယူဆကြပြန်သည်။ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှု ကံကို ပစ်ပယ်ရာရောက်သည်။ ဒါနပြုခြင်း, သီလ ဆောက်တည်ခြင်းတို့သည် အဓိပ္ပါယ်မရှိဟုယူဆ၍ အကိရိယ၀ါဒဟုခေါ်သည်။” ဆိုသည်ကိုတော့ ပို၍စိတ်ဝင်စားပါသည်။
အမှန်တော့ အကောင်းအဆိုးကိုပစ်ပယ်ရတာကလည်း မိမိတို့ ကပြုလုပ်ယူခဲ့တာမဟုတ်တဲ့ အတိတ်ကံလိုမျိုးရဲ့ အဆိုးတွေကို ခံစားနေရသူတွေဘက်ကကြည့်ပြီးစာနာစိတ်နဲ့ လို့ ယူဆပါကြောင်း။ ဥပမာပေါ့..ချေး(မစင်) ဆိုတာရွံစရာလို့ လူတွေကသတ်မှတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အူမကြီးကင်ဆာကြောင့်အူမကြီးဖြတ်ထုတ်ထားပြီး မစင်အိတ်ကို ဗိုက်မှာတပ်ထားရတဲ့သူတွေဟာ လူတောထဲမတိုးဝံ့ဖြစ်ကြရှာတယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာသူတို့ ကိုစာနာပြီး “မစင်ဆိုတာရွံစရာ” ဆိုတာက “လူတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်သာဖြစ်တယ်” ဆိုတာမျိုးနဲ့ ဖြေသိမ့်ပေးကြတာမျိုးလို့ ထင်မိပါတယ်။ သူတို့ ကျူးလွန်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကို အကောင်းမြင်စေချင်စိတ်နဲ့ လို့ တော့ မတွေးမိခဲ့ဖူးကြောင်းပါရှင်။
ဟုတ်တယ်နော် ... ကမ္မ၀ါဒ၏ ဆန့်ကျင်ဖက် အယူအဆ တွေကိုသိထားသင့်တယ် ပြီးတော့ရှောင်လဲရှောင်သင့်တယ်နော် .. ညီမလေးတို့လူတွေက ကိုယ့်ဟာကိုယ် မဟုတ်တာလုပ်မိပြီး တခါတခါ ကံကိုပုံပုံချတတ်လွန်းကြတယ်လေ .. ပြီးတော့ ကိုယ်သက်သာအောင်လဲ ကံနဲ့ဖြေတတ်ကြသေးတာ .. ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါတွေက တခါတခါ ဗုဒ္ဓရဲ့ ကမ္မ၀ါဒနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်အယူအဆတွေ ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာကို သတိလက်လွတ်တွေဖြစ်တတ်ကြတယ်နော်...ဒီပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူးပါကိုဧရာ ..
Comments ရေးသွားသူတွေ မေ့လောက်မှ ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ သေချာထည့် မရေးလိုက်တဲ့ “သစ္စာတရားနယ်” ကို စာဖတ်သူတွေက ဖြည့်ဖတ်သွားကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဘာသာစကား, ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု စသဖြင့် လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှန်တရားတွေ အများကြီးပါ။ သမုတိသစ္စာနယ်မှာ မိမိသူတစ်ပါးအကျိုး ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့, သူတော်ကောင်းတွေ အပြစ်တင်ဝေဖန်နိုင်တဲ့ အပြုအမူအပြောအဆိုတွေကို မကောင်းမှု အကုသိုလ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမုတိသစ္စာနယ်က အကောင်း-အဆိုးတိုင်းကို ကုသိုလ်-အကုသိုလ်နဲ့ ညီမျှခြင်းချလို့ မရတာတွေ အများကြီး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေကို ငြင်းပယ်လိုက်ယုံနဲ့တော့ အကုသိုလ် ဖြစ် မသွားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရာရာဟာ သတ်မှတ်ချက်တွေပါလို့ ငြင်းပယ်လိုက်ရင်တော့ ကုသိုလ်-အကုသိုလ်ကို ငြင်းပယ်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ကာလ, ဒေသ, ဘာသာစကား, ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ် မမှီပဲ ပကတိမှန်ကန်တဲ့ ပရမတ္ထတရားဆိုတာ ရှိနေလို့ပါ။ ပရမတ္ထသစ္စာနယ်မှာ လောဘ, ဒေါသ, မောဟတရားတွေ အခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့ စိတ်စေတနာကို အကုသိုလ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အရင်းကြတဲ့ လောဘ, ဒေါသ, မောဟတရားတွေကို မကြည့်ပဲ၊ “ပရမတ္ထအားဖြင့် လူဆိုတာ မရှိ, အရက်ဆိုတာ မရှိ၊ ရုပ်နာမ်တရားတွေသာရှိလို့ လူသတ်ရင်လည်း လူသတ်တယ် မခေါ်နိုင်ဘူး” စသဖြင့် တလွဲကို ယူပြီး အစွန်းရောက်ရင်တော့ ကုသိုလ်-အကုသိုလ်ကို ငြင်းပယ်ရာ ရောက်ပြန်ပါတယ်။
19 Nov 09, 07:02
momiji: ama,... read.. but... higher for me.
19 Nov 09, 08:31
19 Nov 09, 08:48
မြစ်ကျိုးအင်း: အမရေ အလည်ရောက်ပါတယ်
K: ကျမက..blog list မှာပုံလေးနဲ့ ပေါ်နေတော့..အဲ..ကိုဧရာပုံလားမသိဘူး ဆိုပီး..စပ်စုမလို့.